DeHavilland DHC-7 Spantax FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Size: 64.2 ကို MB
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောမီလ်တန် Shupe နဲ့သူ့အဖွဲ့၏အခြားကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ DeHavilland DHC-7 ဇာတိ FSX နှင့်သဟဇာတနှင့်မော်ဒယ် 100% Prepar3D v4 ။ ဒီ add-on ကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့! Spantax 1959 မှ 1988 ကနေပျံသန်းတဲ့စပိန်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အဓိကအချက်အချာအဆိုပါ Balearic ကျွန်းစု Palma de Mallorca ၌ရှိ၏။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မီလ်တန် Shupe, သူ Mike ကယ်လီ, ဂျော့ခ်ျ, လင်းယုန် Rotorcraft Simulator, Enrique တံဆိပ်။ အဘို့အစုဝေး FSX/P3D ခရစ်အီဗန်အားဖြင့် v3 & 4
DeHavilland Dash7Native FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 93.6 ကို MB
အဆိုပါလင်းယုန် Rotorcraft Simulator / မီလ်တန် Shupe / Sim-Outhouse DeHavilland DHC77(Dash များအတွက်ဝန်ဆောင်မှု pack ကိုFSX native) ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးမော်ဒယ်ပေါ်ပျောက်ဆုံးအတွင်းစိတ်ဂီယာတံခါးများအမှာစကားအဆိုပါ nosegear ယာမြင်ကွင်းဖြေရှင်းနိုင်, လက်ျာတောင်ပံလုယူသောသူ animations တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်သည် "BAS" အသည်းတစ်ဦးပျောက်ဆုံး texture ကထပ်ပြောသည် ... သည့် ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ လင်းယုန် Rotorcraft Simulator - မီလ်တန် Shupe
DeHavilland Dash7FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 30 115
Size: 74.6 ကို MB
FSX ဆိပ်ကမ်းကျော် DeHavilland7Dash - FS2004.This အထုပ်နှင့်အတူတွဲဖက်မသုံးမော်ဒယ်များ, 2D panel ကိုနှင့်ထုံးစံ gauge, ထုံးစံအသံနှစ်ခုပျံသန်းမှုမော်ဒယ် options များနှင့်7liveries ပါဝင်သည်။ ထိပ်တန်းအရည်အသွေး။ အရေးကြီးလည်း7တစ် Civilis သည် Dash အဖြစ်လူသိများသည့် documentation.The က de Havilland ကနေဒါ DHC-7 ဖတ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ပုရွက်ဆိတ်တွေ De Havilland ကျားပိုးဖလံ DH-82A v1.1 FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 15 239
Size: 53.6 ကို MB
ဗားရှင်း 1.1 ။ များအတွက်ကျားပိုးဖလံ FSX အကောင်းဆုံးကို add-on ဟာ Internet.This တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတဦးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သြစတြေးလျမော်ဒယ်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အဟောင်း time.The က de ၏မူလပေါ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအချို့သောအပိုဆောင်း features တွေလည်းပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ် Havilland DH82 ကျားမို ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ အန်သိုနီ Lynch
skis အပေါ် de Havilland DHC-6-300 FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 10 326
Size: 14.64 ကို MB
Kenn Borek Air လေကြောင်းလိုင်း Calgary, ကနေဒါနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောမြေပြင်အနေအထားအတွက်အသုံးပြုရန်, စီးပွားဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှသူတို့စင်းလုံးငှားလေယာဉ်များကမ္ဘာ့အကျယ်မြောက်ပိုင်းကနေဒါ၏ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများ်ထမ်းဆောင်ကာလေကြောင်းလိုင်း operating အပြင်အခြေခံသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွက်အကြီးမားဆုံး DHC-6 စင်းကိုတဦးတည်းလုပ်ကိုင် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ပရီးမီးယားလိဂ်လေယာဉ်ဒီဇိုင်း, Kenn Borek, Lucas Paoloni
အဘို့အ DeHavilland DHC8-မေး 202 ပက်ကေ့ FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 20 707
အဆိုပါ FS2004 သဟဇာတမူကွဲများအတွက် 8 သို့မဟုတ် DHC-8 Dash ယခင်ကက de Havilland ကနေဒါအဖြစ်လူသိများ, ဒီမှာ Bombardier Dash 8 သို့မဟုတ်မေးစီးရီးကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, အလတ်စားအကွာအဝေး, တာဘိုပရော့ယာဉ်များ၏စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ 1984 အတွက်က de Havilland ကနေဒါ (DHC) ကမိတ်ဆက်သူတို့ယခု Bombardier Aerosp ထုတ်လုပ်နေကြပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
DeHavilland ဗိုက်ကင်း DHC6-400 အမွှာ Otter FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 24 642
Size: 15.1 ကို MB
အဆိုပါ FS2004 သဟဇာတဗားရှင်းကဒီမှာ click လုပ်ပါ။ အမွှာ Otter များအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားဗိုက်ကင်း Air ကိုကနဦးအကူအညီက de Havilland ကနေဒါနှင့်အတူ Calgary, ကနေဒါတွင်၎င်း၏စက်ရုံမှာအသစ်သောပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းစတင်ခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ -400 -300 Honeywell အပြင်ဘက်မှတူညီဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့နှင့်အတူ ... ဆက်ဖတ်ရန်
လိုက်ဖက်တဲ့ အတူ OK ကိုစမျးသပျ FSX SP2 + FSX-SE
Dehavilland Bombardier Dash8-Q311 - လန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 20 762
Size: 16.1 ကို MB
အဆိုပါ FS2004 သဟဇာတဗားရှင်းကဒီမှာ click လုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်လက်လွတ်မနေပါနဲ့! Excellent က add-on ကိုအရည်အသွေးမြင့်, ပြည့်စုံပေမယ့်ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်သာယာသောလေယာဉ်၏။ အဆင့်မြှင့် 2D panel က, updated ပြောင်းလဲနေသော VC ကိုအပြည့်အသံ, အပြည့်အဝရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ, ပြောင်းလဲနေသောထွန်းလင်းသက်ရောက်မှု, airstair လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကုန်တင်တံခါး, Surface နှင့်အတူနယူးဒီဇိုင်းကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
de Havilland DHC5 Buffalo တပ်ဖွဲ့ Canadiennes FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 16 196
ဤသည်အစွမ်းထက်အမွှာတာဘိုပရော့တစ်ဦးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်များရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါနောက်ဘက်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်လေကြောင်းတစ်စက်အနေအထားနှင့်အဘို့အ ground.Function တင် / unloading.Complete အထုပ်မှဖွင့်လှစ် FSX, panel က, VC နှင့်ထုံးစံအသံ။ နှင့်အတူကာတွန်း crew.Compatible အပါအဝင်အပြီးအစီးပုံစံပျံသန်းကာတွန်း ... ဆက်ဖတ်ရန်